Igumbi eliphindwe kabili le-balcony/eduze nesiteshi sesitimela/umklamo wekhwalithi ephezulu-6F ikheshi isakhiwo - I-Airbnb
Igumbi eliphindwe kabili le-balcony/eduze nesiteshi sesitimela/umklamo wekhwalithi ephezulu-6F ikheshi isakhiwo
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-子
U-子 Ungumbungazi ovelele
Imisebenzi eseduze nezokuhamba zilungile. Iseduze ne-Hualien Railway Station "Front Station" (uhambo lwemizuzu engu-7), phansi kunezitolo ezintathu ze-24H, i-7-11, isitolo sokuwasha, i-A Liang chicken steak, ukudla okulula okuhlukahlukene, imizuzu emi-5. ukuhamba Movie edolobheni, KTV, imoto esitolo sokuqasha, isikhumbuzo esitolo, njll ...
✔️Igumbi eliphindwe kabili (umbhede ophindwe kabili ojwayelekile) lisitezi sesithupha, linendlu yokugezela ehlukile, kanye nevulandi ehlukile enombono obanzi wentaba emaphakathi futhi kwesinye isikhathi izindiza ezisukayo nezihlala phansi.
✔️Leli gumbi linesikhala esincane (ama-pings ayishumi) futhi litholakala eceleni, lithule kancane, linamafasitela angaphandle.
✔️Nikeza izesekeli eziphelele (umuthi wokuxubha, isixubho, ishampoo, iziliphu ezilahlwayo, amathawula okugeza, omata bezinyawo, iziphanyeko ezipholile).
✔️Kunendawo yokupaka izimoto ezikhokhelwayo eduze. Kungu-10 yuan 24H ngehora (uhambo lwemizuzu engu-5 ukusuka endlini yokuhlala). Ungathola futhi indawo yokupaka emhlophe eduze eceleni komgwaqo. Ibhilidi liphinde linikeze indawo yokupaka yamahhala yezitimela.
4.73 out of 5 stars from 222 reviews
4.73 · 222 okushiwo abanye
Kunezitolo ezinkulu ezintathu ze-24H neyodwa engu-7-11 eduzane, kanye nezitolo zeziphuzo, izitolo zezinkukhu ezinosawoti crispy, ama-snack bars, njll.
U子 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- 花蓮市 namaphethelo